Noocyada dhagaxa, samayska iyo astaamaha | Saadaasha Shabakadda
Maanta waxaan ka hadli doonnaa mowduuc geology ah. Ku saabsan yahay noocyada dhagaxyada jira. Tan iyo markii dhulkeena dhulkeena la sameeyay, malaayiin dhagax iyo macdan ayaa la sameeyay. Waxay kuxirantahay asalkooda iyo nooca tababarkooda, waxaa jira dhowr nooc. Dhammaan dhagxaanta adduunka waxaa loo kala saari karaa saddex kooxood oo waaweyn: dhagaxyo kacsan, dhagaxyo jilicsan iyo dhagxaanta metamorphic.
Hadaad ubaahantahay inaad ogaato dhamaan noocyada dhagaxyada jira, qaab dhismeedkooda iyo astaamahooda, kani waa boostadaada 🙂
1 Dhagaxyada fadhiisinta ah
1.1 Dhagaxyada kala daadsan ee kala daadsan
1.2 Dhagxaanta aan qatarta ahayn
2 Dhagxaanta jahliga
2.1 Dhagaxyada Plutonic
2.2 Dhagaxyada Volkaanka
3 Dhagaxyada Metamorphic
Dhagaxyada fadhiisinta ah
Waxaan ku bilaabaynaa inaan ku sifeyno dhagxaanta dhoobada. Samaysigeedu waxaa sabab u ah rarka iyo dhigaalka agabka oo ay ugu wacan tahay ficilka dabaysha, biyaha iyo barafka. Waxay sidoo kale awood u yeesheen in kiimiko ahaan looga xareeyo dareeraha biyaha ku jira qaarkood. Waqti ka dib, qalabkani waxay isu yimaadaan si ay u sameeyaan dhagax. Sidaa darteed, dhagxaanta dhagxaanta leh waxay ka kooban yihiin waxyaabo badan.
Dhanka kale, dhagxaanta dhagxaanta leh ayaa loo qaybiyaa waxyeello iyo wax aan waxyeello lahayn
Dhagaxyada kala daadsan ee kala daadsan
Kuwani waa kuwa ka samaysmay faaruqinta jajabyada dhagaxyada kale ka dib markii hore loo raray. Waxay kuxirantahay cabirka jajabyada dhagaxa, hal qaab ama midkale ayaa lagu gartaa. Hadday jajab yihiin ka weyn yihiin 2 mm wareegsanna waxaa loo yaqaan conglomerates. Dhinaca kale, haddii ay xagal leeyihiin waxaa loo yaqaannaa nusqaanno.
Haddii jajabyada ka kooban dhagaxa ay jilcaan yihiin, waxaa loogu yeeraa quruurux. Waxaad u badan tahay inaad maqashay quruurux. Goorma ka yar yihiin 2mm kana weyn yihiin 0,6mm, taasi waa in la yiraahdo, isha qaawan xitaa ama microscope optic ah waxaa loogu yeeraa dhagaxa ciida. Marka jajabyada dhagaxa sameeyaa ay aad u yar yihiin oo aan u baahanahay mikroskoob elektaroonig ah, waxaa loo yaqaannaa silts iyo dhoobo.
Xilligan, quruurux waxaa loo isticmaalaa isku-darka dhismaha iyo soosaarida shubka. Isku-dhafka iyo dhagxaanta ciida waxaa loo isticmaalaa cimri dhererkooda dhismaha. Dhoobo ayaa loo isticmaalaa nolol maalmeedkeena iyo isticmaalka daawada iyo is qurxinta. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dhismaha lebenka iyo dhoobada. Waxyaabaha ay guryaha ka celiyaan ayaa ka dhigaya kuwo kaamil ah nuugista alaabada wasakheysa iyo shaandheynta warshadaha. Waxaa loo isticmaalaa inay yihiin alaab ceeriin ah oo loogu talagalay dhismaha dhoobada iyo darbiyada adobe iyo soo saarista qaybo ka mid ah dheryaha dhaqameed, dhoobada dhoobada iyo boomaatada.
Dhagxaanta aan qatarta ahayn
Noocyada dhagxaanta waxaa sameeya roobka xeryahooda kiimikada qaarkood xalalka biyaha ku jira. Qaar ka mid ah walxaha asalka dabiiciga ah ayaa isku urursan kara si ay u sameeyaan dhagaxaan. Mid ka mid ah dhagaxyada ugu caansan uguna caansan ee noocan ah waa nuuradda. Waxaa loo sameeyaa iyada oo loo marayo roobka kaalshiyamka kaarboonta ama isku ururinta jajabka jajabka ee dhuxusha, ostracods iyo gastropods.
Aad bay caadi u tahay in lagu arko jajabyada foslus ee ku jira dhagaxyada noocan ah. Tusaalaha dhagaxa nuuradda waa mid daryeel leh. Waa dhagax aad u daaqaya oo leh geedo faro badan oo ka soo bilaabma wabiyada markii kaalshiyam kaarboonaytku ku fido dhirta.
Tusaale kale oo caan ah waa dolomites. Waxay kaga duwan yihiin kuwii hore inay leedahay walxo kiimiko ah oo leh maadad magnesium sare leh. Markay isku soo ururto qolofka noolaha ee ka samaysan silica, dhagxaan dhagax adag ayaa la sameeyaa.
Waxaa sidoo kale jira nooc dhagax ah oo ka mid ah kuwa aan waxyeelleynin baaqyada evaporitic. Kuwani waxaa lagu sameeyaa uumiga biyaha ee deegaanka badda iyo qoyaanka ama harooyinka. Dhagaxa ugu muhiimsan kooxdan waa gypsum. Waxay ku samaysan yihiin roobka kaalshiyamka ku jira.
Nuuradda waxaa loo isticmaalaa soo saarida sibidhka iyo nuuradda dhismaha. Waa qalab loo isticmaalo waabarka iyo sagxadda sagxadda dhismayaasha. Dhuxusha iyo saliidu waa nooc ka mid ah dhagxaanta aan qatarta lahayn wicitaanada xubnaha jirka. Magaceeda waxaa sabab u ah xaqiiqda ah inay ka timaaddo isku ururinta walxaha dabiiciga iyo haraaga. In kasta oo dhuxulku ka yimaado qashinka dhirta, saliidda laga helo badda. Waxay yihiin dano dhaqaale oo weyn sababtoo ah qiimahooda sare ee kalooriga ee jiilka tamarta iyadoo loo marayo gubashada.
Tani waa nooca labaad ee dhagaxa ah. Waxay ka dhasheen qaboojinta tiro dareere ah oo ka kooban halabuur ka imanaya gudaha Dhulka. Miisaanka la shubay waa heerkul aad u sarreeya wuuna sii xoogeeyaa markuu gaaro dhulka dushiisa. Waxay kuxirantahay halka ay ku qaboojiyaan, waxay dhalin doonaan laba nooc oo dhagax ah.
Kuwani waxay ka soo baxaan marka dareeraha dareeraha ahi qaboojiyo dhulka dushiisa. Taasi waa, in la hoos geeyo cadaadis hoose, macdanta ku jirta gudaha si dhow ayey u wada koraan. Tani waxay keentaa dhagaxyo cufan oo aan daaq lahayn oo samaysma. Qaboojinta cufnaanta dareeraha waa mid aad u gaabis ah, sidaas darteed kristantarradu aad ayey u weynaan karaan.
Mid ka mid ah dhagaxyada ugu caansan ee noocan ah ayaa ah granite. Waxay ka kooban yihiin iskudhaf macdano ah quartz, feldspars iyo mica.
Noocaan waxaa la sameeyaa marka cabbirka dareeraha ahi u kaco bannaanka dhulka dushiisa oo uu ku qaboojiyo. Kuwani waa dhagaxyada sameeya marka dhagaxa fulkaano laga qaboojiyo heerkulka iyo cadaadiska. Kiristaalo dhagaxyadan ku jira ayaa yar yar oo leh walxo u eg muraayad aan waligeed la xadidi karin.
Mid ka mid ah kuwa ugu badan uguna fudud ee la aqoonsan karo waa baasasal iyo dambas.
Dhagaxyadan waxaa laga soo saaray dhagaxyo horay u jiray oo horeyba loo maray heerkulka iyo cadaadiska ayaa kordha by geedi socodka. Dib-u-habeynta ay soo gaadheen dhagaxyada noocan ahi waxay ka dhigaysaa inay beddelaan isku-dhafka iyo macdanta. Nidaamkan metamorphic wuxuu ku dhacaa gobolka adag. Dhagaxa uma baahna in la dhalaaliyo.
Inta badan dhagaxyada metamorphic waxaa lagu gartaa in guud ahaan la burburiyo macdantooda taasoo dhagaxa ka dhigeysa mid la simay oo la dahaaray. Saameyntan waxaa loo yaqaan foliation.
Dhagaxyada ugu caansan ee la yaqaan waa slate, marble, quartzite, gneiss, iyo schists.
Waxaad horeyba sifiican ugartay noocyada dhagaxyada jira iyo qaab dhismeedkooda. Hadda waa adiga markiisa inaad tagto berrinka oo aad garatid noocyada dhagaxyada ee aad arkaysid oo aad ka dheehanayso samaysankooda iyo habka ay u samaysan yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Noocyada dhagaxa, samayska iyo astaamaha
Daraasadani waa mid aad u xiiso badan, waxaan ku yaalaa San Sebastian de los Reyes ee Gobolka Aragua Venezuela waxaana ku yaal buuro nuurad leh oo muhiim ah iyo macdano kale oo ku jira nidaam daloollo iyo godad qurux badan maxaa yeelay waxaan jeclaan lahaa inaan baarto xitaa wax badan oo ku saabsan astaamaha iyo noocyada macdanta ee ku jira godadkan quruxda badan.
Jawaab Jose Joaquin Adarmes Hernandez